Malunga neNkampani-iLong Bamboo Technology Group Co., Ltd.
I-Long Bamboo Technology Group Co., Ltd.iseSithili saseJianyang, kwisiXeko saseNanping, kwiPhondo laseFujian. noomatshini esizisebenzelayo ngoqalo, Ineenkampani ezi-5 kunye nabasebenzi abangaphezulu kwama-900.
Emva kweminyaka engaphezu kwama-10 yophuhliso oluqhubekayo kunye ezintsha, Long Bamboo Group iye yaba umenzi phambili iimveliso bamboo e China. Ngokunyuka okuqhubekayo kotyalo-mali kwizixhobo eziphambili, iLong Bamboo Group ine-CNC yemigangatho emininzi yokuvelisa ngokuzenzekelayo, ingalo yeRobhothi ekrelekrele kunye nezinye izixhobo ezikumgangatho ophezulu.
Kwishishini leemveliso zoqalo, iQela loQalo olude limisele itekhnoloji ekhokelayo kunye nezibonelelo zebrendi, njengeyona nto iphambili eTshayina.
Iqela elide le-Bamboo lishishini lokurhweba langaphandle elidibanisa i-R & D, uyilo, imveliso kunye neemveliso zokuthengisa bamboo. Ivelisa ikakhulu uqalo kunye neemveliso zeenkuni, uqalo kunye nempahla yeplanga, njl. Ngokwaziswa kwemveliso yemveliso ye-CNC ezenzekelayo, i-KUKA ingalo yeerobhothi ekrelekrele kunye nezixhobo ezikumgangatho ophezulu, zonyusa uphando kunye nophuhliso lweemveliso zekhaya esele zikhona, e kwangexesha elifanayo ukwandisa kwiindawo ezintsha ezinje ngezinto ezingaphucukanga zoqalo, uqalo oomatshini bokulungisa ngokuzenzekelayo kunye nezinye iimveliso ezintsha ezinje ngeemveliso zeFMCG.
Imbuyekezo Nanping Zhubeli E-commerce Co., Ltd.
Inkxaso-mali yayo yeNanping Zhubeli E-commerce Co, Ltd., yasekwa ngeyoMqungu ngo-2016, yazibandakanya ekungeniseni nasekuthumeleni kumazwe angaphandle kunye nokuthengiswa kwe-intanethi kwefanitshala, i-tableware, izitya zasekhitshini, izinto zeofisi, njl.
I-Fujian Maker Steel kunye ne-Bamboo Houseware Co., Ltd.
I-Fujian Maker Steel kunye ne-Bamboo Houseware Co., Ltd., esekwe ngoMeyi ka-2018, inamalungelo awodwa omenzi wechiza angama-25 (kubandakanya amalungelo awodwa omenzi wechiza ama-3 kunye namalungelo awodwa omenzi wechiza angama-22). Lishishini elibanzi elidibanisa uyilo, imveliso kunye nokuthengiswa kwempahla yentsimbi engenasici, iimveliso zasekhitshini, iimveliso zeofisi kunye neemveliso zensimbi. Ngokutsho kolwakhiwo oluqhelekileyo "lwefektri eluhlaza", inkampani ikhetha ukukhuselwa kwendalo okuqhubela phambili ekubunjweni okuzenzekelayo nakwimveliso yokutshiza ngokuzenzekelayo kunye nomgangatho wobushushu obusezantsi obenziwe yiJamani. Ifumene ngaphezulu kwe-70% yenkqubo yemveliso ngoomatshini kunye no-zero formaldehyde ukukhutshwa kwinkqubo yokutshiza. Okwangoku, ivelisa ikakhulu i-bamboo yentsimbi kunye nemithi yentsimbi kunye.
Fujian Bend Ubuchule Houseware Co., Ltd.
Fujian Bend Ubuchule Houseware Co., Ltd. yasekwa ngoJuni 2018 iye 16 eluncedo patent imodeli. Yinkampani egxile kuyilo, imveliso, ukuthengisa kunye nentengiso ekwi-intanethi yemithi kunye nezinto zokugoba ngoqalo, ifanitshala egobile kunye nezinye izinto; uyilo, imveliso kunye nenkonzo yokuthengisa i-bamboo yangaphandle, izinto zokwakha iinkuni kunye nefenitshala. Yinkampani yorhwebo lwangaphandle enesiphumo. Sivelise kwaye savelisa iintlobo ezimbini zeemveliso (uqalo olugobileyo kunye neenkuni eziqinileyo) kunye noluhlu lweemveliso ezintathu (uthotho lwerestyu, uthotho lwegumbi lokuhlambela kunye nosihlalo wesitulo). Kwixa elizayo, inkampani izakuxhomekeka kwizibonelelo zoncedo zeqela ngoqalo, uqalo iinkuni, uqalo sentsimbi kunye nezinye iiprojekthi zeemveliso zokuphuhlisa iimveliso ezinokujolisa kwikhaya eligobile kunye nefenitshala, kwaye ibe yimveliso yenkwenkwezi yeqela kunye neshishini elinamandla ngakumbi elaziwayo kolu shishino
I-Nanping Longtai eyenzelwe i-Houseware Co, Ltd.
I-Nanping Longtai eyenziwe ngokwezifiso i-Houseware Co, Ltd. yasekwa nge-Janyuwari 2020, ikakhulu ivelisa kwaye ithengise izinto zasekhaya ezenziwe kunye nezinto zendlu. Le nkampani ibekwe njengomthengisi okrelekrele, iimodyuli kunye neemveliso ezizenzekelayo ezenziwe ngeemveliso zoqalo, egxile kwiimveliso zoqalo ezinokubakho nezizayo. Ngolawulo lolwazi kunye nemveliso yeyunithi, inkampani ijolise kwimveliso enkulu kunye esemgangathweni yeemveliso ezenzelwe wena. Kwinqanaba lokuqala, inkampani ikakhulu isebenza ifanitshala eyenziwe ngoqalo, kwixa elizayo, ulwenziwo lomntu lunokufezekiswa ngophuhliso lweearhente okanye uthungelwano lwe-Intanethi, ukuze uqhubeke ukuphucula ukhuphiswano olusisiseko lwamashishini.
UFujian Longmei Innovation Industry Co., Ltd.
I-Fujian Longmei Innovation Industry Co., Ltd. yasekwa ngoFebruwari 2021, ikakhulu ibandakanyeka kwi-R & D, kwimveliso kunye nasekuthengiseni izinto zoqalo, iimveliso ze-bamboo FMCG kunye noomatshini abazenzekelayo. Iimveliso eziphambili zi-bamboo FMCG kunye noqalo olwenziweyo ngoomatshini. Inkampani iceba ukugqibezela ulwakhiwo lomgubo wamalahle kunye nemigca yokuvelisa ipleyiti ngasekupheleni kuka-2021, kwaye iqale ukuqhuba imveliso epheleleyo yoqalo ye-FMCG ukuphela kuka-2022. iiseti zeemela zoqalo kunye neefolokhwe, kunye neziqwenga zokuxhoma idyasi yoqalo).
Okwangoku, iLong Bamboo Group ifumene amalungelo awodwa omenzi wechiza ali-169 agunyazisiweyo (ali-128 kwinkampani engumzali), kubandakanya amalungelo awodwa omenzi wechiza ali-17 (ali-14 kwinkampani engumzali)